Ny fizahan-tany Seychelles dia manomboka amin'ny fakan-kevitra momba ny varotra amin'ny taona faran'ny taona
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Ny fizahan-tany Seychelles dia manomboka amin'ny fakan-kevitra momba ny varotra amin'ny taona faran'ny taona
Vaovao Mafana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Fizahan-tany momba ny fizahantany Seychelles fizahan-tany
Ny fizahantany Seychelles dia nandefa ny dinika nifanaovany isan-taona tamin'ny taona 2021 sy ny fifanakalozan-kevitra amin'ny varotra miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka fizahan-tany ao an-toerana ny talata 27 jolay mba handinihana ny fahombiazan'ny toerana hatrizay ary hiresahana sy hanitsiana ny drafitra amin'ny tapany faharoa amin'ny taona.
Natomboka tamin'ny lahateny fohy nataon'ny minisitry ny raharaham-bahiny sy fizahan-tany, ny masoivoho Sylvestre Radegonde.
Ny sekretera foiben'ny fizahan-tany, Ramatoa Sherin Francis, dia nanolotra fampisehoana ny paikadin'ity departemanta ity.
Ny Sampan-draharahan'ny fizahantany dia miara-miasa akaiky amin'ireo mpandray anjara amin'ny fizahan-tany sy ireo fikambanan'ny governemanta handinika ny vokatra atolotra any Seychelles ary hanome serivisy tsara kokoa ho an'ireo mpitsidika azy.
Vao haingana i Seychelles no nandrakitra ny fahatongavan'ireo mpitsidika isan-kerinandro indrindra hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana tamin'ny martsa 2021, miaraka amin'ireo mpitsidika miisa 5,367 29 tamin'ny Herinandron'ny 2021 22, na 2019% fotsiny ambanin'io herinandro io ihany tamin'ny taona XNUMX, dia nahalala ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria.
Natao tamin'ny sehatra virtoaly ZOOM, ny consultations, izay hatao mandritra ny tapa-bolana ho avy, dia natomboka tamin'ny lahateny fohy nataon'ny Minisitry ny raharaham-bahiny sy ny fizahantany, masoivoho Sylvestre Radegonde, ho an'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria ao amin'ny Seychelles ary ny mpiasan'ny Departemantan'ny Fizahantany manerantany. Narahin'ny fampisehoana ny paikadin'ity departemanta ity ny sekretera foibe misahana ny fizahan-tany (PS), Ramatoa Sherin Francis.
Raha niresaka tamin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria ny minisitra Radegonde dia nanipika fa ankoatry ny areti-mandringana, izay mampihena ny fivezivezena manerana izao tontolo izao, ny indostrian'ny fizahan-tany eo an-toerana dia miatrika fanamby maro, manakana ny fitomboan'ny indostria. Nanome toky ny Minisitra fa ny Sampan-draharahan'ny fizahan-tany dia miara-miasa akaiky amin'ireo mpandray anjara amin'ny fizahantany sy ny fikambanan'ny governemanta isan-karazany handinika ny vokatra atolotra any Seychelles ary hanome serivisy tsara kokoa ho an'ireo mpitsidika azy.
Naneho hevitra ny minisitra Radegonde amporisihina mafy izy noho ny fitomboan'ny isan'ny mpitsidika tsy tapaka, sy ny fizarana voalanjalanja an'ireo mpitsidika amin'ny haben'ny orinasa sy ireo nosy isan-karazany.
Tamin'ny famelabelarany dia nanolotra topimaso eran'izao tontolo izao ny indostrian'ny fizahan-tany eto an-toerana i PS Francis, naneho hevitra momba ny fiantraikan'ny tsy fahazoana antoka eran-tany amin'ny toekarenan'i Seychelles ary koa ny fanomezana ny drafitry ny vinavina manoloana ny isan'ny tonga ary ny famandrihana natao taloha , izay mampiseho fitomboana andrasana mandritra ny roa volana manaraka.